२०७६ मङ्सिर २८ शनिबार Saturday, December 14
विशेष समाज विचार-विश्लेषण खेलकुद अन्तर्वार्ता फोटो-फिचर
५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आयाआर्जनका लागि सहयोग
लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६दिने अभियानको अबसरमा बृहत् कार्यक्रम गरि समापन
दलित पत्रकार संघकाे अध्यक्षमा जगतदल
शिवराज नगरपालिकामा सिकाई सम्बन्धि ३ दिने तालिम संचालन ।।
गोरुसिङ्गेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भव्य स्वागत
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम
पश्चिम क्षेत्रको भ्रमणमा निस्केका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भोली गोरुसिङ्गे आउने
किर्डाक नेपालको आयोजनामा एनिमेटर तथा कर्मचारीहरूको मासिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न ।।
हत्याको दोषीलाई कार्वाहीको माग गर्दै दुई घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध
कपिलवस्तुको लालपुरमा ८३ प्रतिशत मत खस्यो
निर्णयमा परिपक्व छु : उपमेयर चौधरी
नारी साँच्चै कमजोर छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् शिवराज नगरपालिकाकी उपमेयर शिव कुमारी चौधरी । उपमेयर चौधरीको १७ वर्षकै उमेरमा विवाह भयो । जिम्मेवारी थपिदै गयो २० वर्षको उमेरमा एक सन्तानकी आमा बन्नुभयो । राजनीतिमा पनि सक्रिय चाैधरी २३ वर्षको उमेरमै जनताबाट निर्वाचित हुनुभयो । राजनीतिक र पारिवारिक जिम्मेवारी कसरी अगाडी वढाउनु हुदैछ ? जनताको सेवामा तल्लिन उपमेयरका भावी योजना के छन् ? उमेरले सानो ठूलो भन्दा पनि बिचार र काममा विश्वस राख्ने नेपालकै कान्छी उपमेयरसँग सहकर्मी शिव अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश…
उपमेयरज्यू, सवैले नेपालकै कान्छी उपमेयर भनि रहदाँ रिस उठ्दैन ?
मलाई रिस उठ्दैन । म २३ वर्षको हुदाँ चुनाव जितेको थिएँ । मलाई माया गरेर नै ‘कान्छी’ उपमेयर भनेको हो । मलाई खुसी लाग्छ ।
मेयर र उपमेयरको उमेर धेरै अन्तर छ, विचार मिल्छ ?
मिल्छ । मेयरले नराम्रा योजना ल्याउनु हुँदैन । मेयरले ल्याएका योजनाहरुमा मैले ‘सर्पाेट’ गर्छु र मैले ल्याएका योजनाहरुमा पनि मेयरले ‘सर्पाेट’ गर्नुहुन्छ ।
उमेर कम छ, केहि कुरा बुझेको छैन होला भनेर पनि कसैले त्यस्ताे व्यवहार गर्छन् ?
आजसम्म यस्तो व्यवहार गरिएको छैन् । तर चुनावताका वर्षाैं राजनीति गरेका पाका उम्मेद्धारहरु उठ्नुभएको थियो । त्यति बेला भन्नुहुन्थ्यो, सानो उमेरको छ । उसले त्याति बुझेको छैन् । यसले के गर्छे ? भन्थे तर निर्वाचित भइसकेपछि त्यस्तो कसैले पनि भन्न सकेको छैन् । सबै भन्दा ठूलो शिक्षा हो । म काम गर्दा अध्ययन गरेर मात्रै काम सुरु गर्छु ।
तपाई न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, जुन संविधानले अधिकार नै दिएको छ । संयोजक भएर काम गरिरहँदा तपाईलाई केही अप्ठ्यारो भएको छ ?
न्यायिक समिति सञ्चालन गरिरहँदा मलाई अप्ठ्यारो भएको छैन । किन भने हामीले निश्पक्षताको आधारमा काम गर्ने हो । कुनै–कुनै मुद्दामा राजनीतिक दवाव आउँछ । यो मेरो मान्छे हो, मुद्दा हेर्दिनु होला भन्छन् । म मुद्दाको जड के हो हेर्छु । अन्यायमा को परेको छ त्यो हेर्छु र निश्पक्षता र इमान्दारीताका साथ अघि बढ्छु ।
हिजोकी मेरी सानी छोरी, भतिजी, बहिनी आज मेरो विवाद हेर्ने भईसकी छ, भनेर आफन्तले भन्नुहुन्छ ?
भन्नुहुन्छ । गाउँघरमा सानो विवाद भए पनि मलाई बोलाउन आउछन् । म पनि त्यहाँ पुग्छु, जे उचित हो त्यहि भन्छु । अग्रजहरुले हामीले जिताएर त्यो ठाउँमा पुर्याए पछि आज हामीलाई यसरी सम्झाउने भइसकी भन्नुहुन्छ । खुसी लाग्छ ।
तपाईँलाई सोझो देखेर उपयोग वा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ नि होईन् ?
मलाई प्रयोग गरेर आफुले स्वार्थ लिन सक्दैनन् । त्यस्तो ठाउँनै मैले दिदैँन। निर्वाचित गराई सकेपछि जनतामा अपेक्षा त धेरै नै हुन्छ । सकेसम्म मैले पूरा गरेको छु । यदि मैले सकेन भने मैले बाटो देखाइदिन्छु ।
विवाहित हुनुहुन्छ, उपमेयरको रुपमा दौडधुप गरिरहनुहुन्छ घर परिवारमा समस्या हुदैन् ?
म चुनाव लड्नुभन्दा पहिले नै हाम्रो घर परिवारको सल्लाह भएको थियो । पूर्णरुपमा परिवारबाट साथ सहयोग पाएकी छु ।
धेरै नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीच विवाद देखिन्छ । यस्ताे विवाद किन हुन्छ ?
उपमेयरलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ । उनिहरुले पूरा अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । त्यस कारण विवाद हुन्छ । हाम्रो नगरपालिकामा त्यस्तो भएको छैन ।
अझै पनि बालविवाह भइरहेको छ, अबका बालिकाहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
बालविवाह हाम्रो समाजको अपराध हो । सरोकारवाला निकायले बालविवाह न्युनिकरणको लागि जनचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले १६\_१७ वर्षको चञ्चले उमेरमै भागी विवाह गर्ने देखिएको छ ।
अहिले बालविवाह न्युनिकरण तपाईँको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने होइन ?
प्रत्येक टोलमा किशोरी संवाद गठन गरेका छौं । यसले गर्दा किशोरीहरु धेरै सचेत भइसकेका छन् ।
अन्त्यमा, तपाईँ केहि भन्न चाहनु हुन्छ ?
अमूल्य मत दिएर मलाई यो ठाउमा पुर्याउनुभयो विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले गरेका निर्णयमा म कहिल्यै पनि डगमगाएको छैन् । हिंसा न्युनिकरणको लागि बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएको छु । महिला तथा युवालाई पनि विशेष जोड दिएको छु । महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्याक्ति लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । बालबालिका, अपाङ्ग, हिंसापिडित पिडित महिलालाई तत्काल उद्धार गर्न कोष खडा गरेका छौं ।
तपाईँको इच्छ वा लक्ष्य के छ ?
म अहिले नै केहि भन्न सक्दिन । जनताको इच्छ के छ ? मैले बुझ्नुपर्छ । जनताको साथ सहयोग पाएपछि मेयरमा जान्छु । मेरो राजनीतिक यात्रा विभिन्न चरणवद्ध हुन्छ । जनताको साथ सहयोग जहाँ सम्म हुन्छ त्याहि सम्म पुग्छु । देशकै कार्यकारी प्रमुखसम्म हुने सोच छ । मेरो खबरबाट